ရွာကိုသတိရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ရွာကိုသတိရ	10
Posted by aye.kk on Oct 28, 2016 in Photography | 10 comments
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ၀တ်မှုံရယ်
aye.kk says: မျစ်
Thint Aye Yeik says: ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေး
ဘဝ တစ်သက်တာဟာ ရေပွက်ပမာမျှသာ. . .
အဲ့ဒီ အယူအဆကိုက အလှတရားတစ်ခုပဲ လို့ ထင်မိတယ် အန်တီ။ ဘဝဟာ အရှည်ကြီး
သက်တမ်းကလည်း နှစ်ပေါင်း ငါးရာလောက် ဆိုရင်. .
တီအေးကိုလည်း ရွာက လွမ်းပါကြောင်း
kai says: ဘ၀ဆိုတာ.. တချို့တို.. တချို့ရှည်..
အဲဒါကို.. တိုပါတယ်ဟေ့.. တိုပါတယ်… လုပ်နေတဲ့အထိ.. အိုကေ….
အဲဒါကို အကြောင်းပြပြီး.. တခုခုကို.. ဆွဲဆောင်လုပ်စေရင်တော့..
..လူပေါ်လူလည်လုပ်တာပဲလို့.. ထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11631
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အိပ်မရတဲ့ညက
Was this answer helpful?LikeDislike 2360
aye.kk says: အသက်ရှည်ရှည်နေသူများအတွက်
သူကြီးအမြင်အရ သူကြီးအနေနဲ့ မှန်ပါကြောင်းပြောပြပါရစေ။။
aye.kk says: အန်တီက
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဘ၀….ခါးခါး..ချိုချို ….လျှောက်အုံးဟေ့..လျှောက်အုံးဟေ့…နောက်ဆုံးနေ့ထိ…♫♀♪♫
aye.kk says: အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက်